जब प्रधानमन्त्रीका पुर्व सल्लाहाकार नै यसो भने ... | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more जब प्रधानमन्त्रीका पुर्व सल्लाहाकार नै यसो भने ...
चैत २१ गते, २०७६ - १४:४८
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको काम साइबर अपराधको पनि उच्च दृष्टान्त भएको भन्दै त्यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले काठमाडौं प्रेसको न्यूज ह्याक गरी हटाउने काममा असगर अली र विश्वास ढकाल हथौंडा मात्र भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो ट्वीटमा ट्वीट गर्दै उक्त कुराको जानकारी गराएका हुन्।
बाह्रखरी अनलाइनमा ‘प्रकाशित काठमाडौं प्रेस ह्याक गरेको सिरान टेक्नोलोजीद्वारा स्वीकार’ शीर्षकको न्यूज पोष्ट गर्दै डा. अर्यालले बालुवाटारको अनुमतिबिना असगर र विश्वासले त्यो काम गर्नै नसक्ने बताएका छन्। यस खालको गतिविधिमा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन भएको र त्यो कुरा खोज्नुपर्नेसमेत उनले लेखका छन्।
डा. अर्यालले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘असगरजी र विकासजी प्राविधिक मात्र हुन, म हथौडालाई भन्दा हथौडा चलाउने हातलाई खोज्नुपर्छ भन्छु। यो प्रकरणको कारक राजनीतिक तहकै हुनुपर्छ। सिरान टेकलाई कसले त्यसो गर्न लगायो, त्यो खोजौं। उनीहरूको मात्र आँटले त्यति ठूलो गलत काम भएको छैन।’
उनले आफ्नो ट्वीट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत मेन्सन गरेका छन्। सिरान टेकले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन बिना त्यसो गर्न नसक्ने डा. अर्यालको तर्क छ। सानो आँटले त्यति ठूलो गलत काम नभएको भन्दै उनले हथौडा ठोक्ने हात खोज्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री र उनको टीम नै साइबर अपराधमा जोडिएकोसमेत उल्लेख गरेका हुन्।
बुधबार काठमाडौं प्रेसमा प्रकाशित न्यूज प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ असगर अलीले आफ्नो कम्पनि सिरान टेकमार्फत् डिलिट गर्न लगाएका थिए। प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको काम साइबर अपराधको पनि उच्च दृष्टान्त भएको भन्दै त्यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले समेत त्यसको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
यता सिरान टेक्नोलोजीले काठमाडौं प्रेस ह्याक गरेको स्वीकार गरेको छ। सिरान टेक्नोलोजिजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “सम्पादक गोविन्द परियार र सिरान टेक्नोलोजीको व्यवस्थापनबीच समाचारका विषयमा संवाद चलिरहेको बेला गलत सूचनाका कारण सिरान टेक्नोलोजीको प्राविधिक टिमले न्युज पोर्टलबाट उक्त समाचार हटाइउको छानबिनका क्रममा पाइयो। देशभर भएको लकडाउनका कारण सिरान टेक्नोलोजिजको सम्पूर्ण टीम अहिले वर्क फ्रम होमबाट काम गरिरहेको छ। अहिलेको यो विषय परिस्थितिमा काम गर्ने क्रममा गलत सूचना आदानप्रदान हुँदा गम्भीर त्रुटी हुन गएको हामीले पायौँ।”
विज्ञप्तिमा समाचार हटेको जानकारी पाउनासाथ फेरि प्राविधिक टिमलाई भनेर त्यो समाचार जस्ताको त्यस्तै प्रकाशित हुने वातावरण समेत तयार पारेको उल्लेख छ। सिरान टेक्नोलोजिजका तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष विश्वास ढकालले काठमाडौं प्रेसका सम्पादक गोविन्द परियारलाई पत्र लेखेर चिन्ता व्यक्तसमेत गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसरी सिरान टेकले आफूहरुले काठमाडौं प्रेसको समाचार डिलिट गरेको स्वीकारेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको साइबर क्राइममाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ। संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट साइबर अपराध हुनुले सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
चैत २१ गते, २०७६ - १४:४८ मा प्रकाशित